တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းများ – the One Sports Journal
ဇွန်လ(၁၁)ရက်မှာ စတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်တဲ့ ယူရို-၂၀၂၀ပြိုင်ပွဲဟာ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ အုပ်စု(A)၊(B)၊ (C)၊ (D)ကပွဲစဉ်တချို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးပါပြီ။
မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ အင်္ဂလန်အသင်းက ခရိုအေးရှားကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး သြစတြီးယားအသင်းက မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားအသင်းကို (၃-၁)ဂိုး၊ နယ်သာလန်အသင်းက ယူကရိန်းအသင်းကို (၃-၂)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် အဖွင့်လှခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အဲဒီ(၃)ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာစံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
(အင်္ဂလန်) – နည်းပြဆောက်ဂိတ်လက်ထက်မှာ နောက်တန်း(၄)ဦးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်း(၂၉)ပွဲမှာ (၂၂)ပွဲအထိအနိုင်ရခဲ့ပြီး
အနိုင်ရာခိုင်နှုန်း(၇၆%)ရယူခဲ့သလို နောက်တန်း(၃)ဦးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာတော့ (၂၅)ပွဲကစား (၁၂)ပွဲသာအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်
(စတာလင်) – ခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲမှာ အနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့စတာလင်ဟာ လက်ရှိကစားသမားတွေထဲ ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ပွဲအများဆုံးကစားထားသူဖြစ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး (၂၃)ပွဲကစား၊ (၂၁)ပွဲနိုင်၊ (၂)ပွဲသရေနဲ့ ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။
(၁၁) – အင်္ဂလန်အသင်းဟာ စတာလင်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ (၁၁)ပွဲမှာ ပွဲတိုင်းအနိုင်ရခဲ့ပြီး ဒါဟာ အသင်းတိုက်စစ်မှူးဟောင်း မာတင်ချီဗာစ် ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲအရေအတွက်ထက် တစ်ပွဲပိုများခဲ့ပါတယ်။
(ခရိုအေးရှား) – ခရိုအေးရှားအသင်းဟာ အင်္ဂလန်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ပြင်သစ်(၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား)၊ ပေါ်တူဂီ(ယူရို-၂၀၁၆)၊ စပိန်(ယူရို-၂၀၁၂)တို့ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး သူတို့ကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အသင်းတိုင်း ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(ပန်ဒက်ဗ်) – သြစတြီးယားနဲ့ပွဲမှာ မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားအသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီးပန်ဒက်ဗ်ဟာ
အသက်(၃၇)နှစ်၊ (၃၂၁)ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ယူရို-၂၀၀၈ ပြိုင်ပွဲတုန်းက ပိုလန်ဘက်ကို ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ သြစတြီးယားကစားသမား ဗက်စတစ်(၃၈နှစ်၊ ၂၅၇ရက်)နောက်ပိုင်း ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ဒုတိယမြောက်အသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
(စတီကယ်လန်ဘတ်) – အသက်(၃၈)နှစ်၊ (၂၆၄)ရက်ရှိပြီဖြစ်သူ နယ်သာလန်အသင်းဝါရင့်ဂိုးသမားစတီကယ်လန်ဘတ်ဟာ
အသင်းရဲ့ဂန္ထဝင်ဂိုးသမားဗန်ဒါဆားကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား/ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ငံအသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့အသက်အကြီးဆုံးကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ပါပြီ။
ဗန်ဒါဆားဟာ ယူရို-၂၀၀၈ပြိုင်ပွဲတုန်းက (၃၇)နှစ်၊ (၂၃၆)ရက်နဲ့စံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ စတီကယ်လန်ဘတ်က အဲဒီစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(ဝိုင်နယ်လ်ဒန်း)- ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ နယ်သာလန်အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကွင်းလယ်လူဝိုင်နယ်လ်ဒန်းဟာ
(၂၅၂၈) ရက်အကြာမှာ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာ လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
(၈၅) – ယူကရိန်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ နယ်သာလန်ကစားသမား ဒမ်ဖရီဟာ အသင်းအတွက်အနိုင်ဂိုးကို ပွဲပြီးခါနီး(၈၅)မိနစ်မှာ
ယူရို-၂၀၀၀ ပြိုင်ပွဲ၊ ချက်အသင်းနဲ့ပွဲတုန်းက (၈၉)မိနစ်မှာ အခုလက်ရှိနယ်သာလန်နည်းပြဖရန့်ခ်ဒီဘိုးဟာ ပယ်နယ်တီကနေ
နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်အတွင်း နယ်သာလန်ကစားသမားတစ်ဦး ပွဲပြီးဖို့မိနစ်ပိုင်းအလိုမှ
တနဂၤေႏြေန႔မွာကစားခဲ့တဲ့ ယူ႐ိုပြဲစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စံခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ား
ဇြန္လ(၁၁)ရက္မွာ စတင္က်င္းပေနၿပီျဖစ္တဲ့ ယူ႐ို-၂၀၂၀ၿပိဳင္ပြဲဟာ တနဂၤေႏြေန႔အထိ အုပ္စု(A)၊(B)၊ (C)၊ (D)ကပြဲစဥ္တခ်ိဳ႕ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
မေန႔က ကစားခဲ့တဲ့ပြဲေတြမွာ အဂၤလန္အသင္းက ခ႐ိုေအးရွားကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၾသစႀတီးယားအသင္းက ေျမာက္မက္ဆီဒိုးနီးယားအသင္းကို (၃-၁)ဂိုး၊ နယ္သာလန္အသင္းက ယူကရိန္းအသင္းကို (၃-၂)ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္ အဖြင့္လွခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ(၃)ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာစံခ်ိန္မွတ္တမ္းေတြကို ပရိသတ္ေတြသိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ . . .
(အဂၤလန္) – နည္းျပေဆာက္ဂိတ္လက္ထက္မွာ ေနာက္တန္း(၄)ဦးနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ပြဲေပါင္း(၂၉)ပြဲမွာ (၂၂)ပြဲအထိအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး
အႏိုင္ရာခိုင္ႏႈန္း(၇၆%)ရယူခဲ့သလို ေနာက္တန္း(၃)ဦးနဲ႔ကစားခဲ့တဲ့ပြဲေတြမွာေတာ့ (၂၅)ပြဲကစား (၁၂)ပြဲသာအႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္
(စတာလင္) – ခ႐ိုေအးရွားနဲ႔ပြဲမွာ အႏိုင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့တဲ့စတာလင္ဟာ လက္ရွိကစားသမားေတြထဲ ဝင္ဘေလကြင္းမွာ ပြဲအမ်ားဆုံးကစားထားသူျဖစ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ၿပီး (၂၃)ပြဲကစား၊ (၂၁)ပြဲႏိုင္၊ (၂)ပြဲသေရနဲ႔ ရႈံးပြဲမရွိခဲ့ပါဘူး။
(၁၁) – အဂၤလန္အသင္းဟာ စတာလင္ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ (၁၁)ပြဲမွာ ပြဲတိုင္းအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဒါဟာ အသင္းတိုက္စစ္မႉးေဟာင္း မာတင္ခ်ီဗာစ္ ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲအေရအတြက္ထက္ တစ္ပြဲပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။
(ခ႐ိုေအးရွား) – ခ႐ိုေအးရွားအသင္းဟာ အဂၤလန္နဲ႔ပြဲမတိုင္ခင္ ျပင္သစ္(၂၀၁၈ ကမာၻ႔ဖလား)၊ ေပၚတူဂီ(ယူ႐ို-၂၀၁၆)၊ စပိန္(ယူ႐ို-၂၀၁၂)တို႔ကိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ကို အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့အသင္းတိုင္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
(ပန္ဒက္ဗ္) – ၾသစႀတီးယားနဲ႔ပြဲမွာ ေျမာက္မက္ဆီဒိုးနီးယားအသင္းအတြက္ ဂိုးသြင္းခဲ့တဲ့ ဝါရင့္တိုက္စစ္မႉးႀကီးပန္ဒက္ဗ္ဟာ
အသက္(၃၇)ႏွစ္၊ (၃၂၁)ရက္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ယူ႐ို-၂၀၀၈ ၿပိဳင္ပြဲတုန္းက ပိုလန္ဘက္ကို ဂိုးသြင္းခဲ့တဲ့ ၾသစႀတီးယားကစားသမား ဗက္စတစ္(၃၈ႏွစ္၊ ၂၅၇ရက္)ေနာက္ပိုင္း ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဒုတိယေျမာက္အသက္အႀကီးဆုံးဂိုးသြင္းသူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။
(စတီကယ္လန္ဘတ္) – အသက္(၃၈)ႏွစ္၊ (၂၆၄)ရက္ရွိၿပီျဖစ္သူ နယ္သာလန္အသင္းဝါရင့္ဂိုးသမားစတီကယ္လန္ဘတ္ဟာ
အသင္းရဲ႕ဂႏၴဝင္ဂိုးသမားဗန္ဒါဆားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ကမာၻ႔ဖလား/ယူ႐ိုၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ပါဝင္ကစားခဲ့တဲ့အသက္အႀကီးဆုံးကစားသမားအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါၿပီ။
ဗန္ဒါဆားဟာ ယူ႐ို-၂၀၀၈ၿပိဳင္ပြဲတုန္းက (၃၇)ႏွစ္၊ (၂၃၆)ရက္နဲ႔စံခ်ိန္တင္ထားတာျဖစ္ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စတီကယ္လန္ဘတ္က အဲဒီစံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
(ဝိုင္နယ္လ္ဒန္း)- ၂၀၁၄ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ နယ္သာလန္အသင္းအတြက္ ဂိုးသြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကြင္းလယ္လူဝိုင္နယ္လ္ဒန္းဟာ
(၂၅၂၈) ရက္အၾကာမွာ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲႀကီးတစ္ခုမွာ လက္ေ႐ြးစင္အသင္းအတြက္ ပထမဆုံးဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
(၈၅) – ယူကရိန္းကို အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ပြဲမွာ နယ္သာလန္ကစားသမား ဒမ္ဖရီဟာ အသင္းအတြက္အႏိုင္ဂိုးကို ပြဲၿပီးခါနီး(၈၅)မိနစ္မွာ
ယူ႐ို-၂၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ခ်က္အသင္းနဲ႔ပြဲတုန္းက (၈၉)မိနစ္မွာ အခုလက္ရွိနယ္သာလန္နည္းျပဖရန႔္ခ္ဒီဘိုးဟာ ပယ္နယ္တီကေန
အႏိုင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္အတြင္း နယ္သာလန္ကစားသမားတစ္ဦး ပြဲၿပီးဖို႔မိနစ္ပိုင္းအလိုမွ
ကိုပါအမေရိက အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဘရာဇီးအသင်း ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိပြီး နိုင်ငံအသင်းမှာ သွင်းဂိုး (၆၇) ဂိုးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ နေမာ